Maxaad Kala Socotaa Shanta Dacwadood Ee Uu Wajahayo Badhasaabka Gaarissa? | Kaafi News
Maxaad Kala Socotaa Shanta Dacwadood Ee Uu Wajahayo Badhasaabka Gaarissa?
Xarigga mas’uuliyiintan waxaa amray dacwad oogaha guud ee dalka Kenya, Nuuradiin Xaaji daba-yaaqada todobbaadkii la soo dhaafay kadib markii uu sheegay in ay ku tuhmayaan in si khaldan loo isticmaalay lacago loogu tala galay mashaariic horumarineed.
6- In mudane Cali Bunow Qorane, oo ah barasaabka ismaamulka Garissa uu tan iyo 21-kii August 2017 yahay qofka mas’uulka ugu sarreeya ka ah dowlad goboleedkaas sida ku xusan qodobka 179 (4) ee dastuurka oo la meel mariyay sanadkii 2010-kii, waajibaadkiisuna yihiin inuu hoggaamiyo howlaha dowladda hoose, sidaas awgeedna ay tahay in lagula xisaabtamo maareynta mashaariicda ismaamulkaas.
Maxay yihiin dacwadaha ay wajahayaan saraakiishan?
Nooca dacwadaha ay maxkamadda ku wajahayaan Ali Bunow iyo madaxda kale ee ismaamulkiisa ka tirsan waxaa sharraxay Dacwad oogaha guud, waxayna kala yihiin:
1- Abuurashada waxyaabo aan jirin si loo galo dambi dhaqaale, taasoo ka dhan ah qodobka 47 A (3) iyo qodobka 48-aad ee sharciga lambar 3 ee la dagaallanka musuqmaasuqa iyo dambiyada dhaqaalah, oo la meel mariyay 2003-dii.
2- Ku guul darreysiga raacitaanka sharciga maareynta dhaqaalaha dowladda, taasoo ka dhan ah qodobka 45 (2) (b) ee sharciga lambar 3 ee la dagaallanka musuqmaasuqa iyo dambiyada dhaqaalah, oo la meel mariyay 2003-dii.
3- Wac isdabamarin lagu sameeyay dhaqaalaha dowladda, taasoo ka dhan ah sharciga maareynta dhaqaalaha dowladda ee 2012.
4- Fulinta mashaariic aan horay loo sii qorsheynin, taasoo ka dhan ah qodobka 45 (2) (c) iyo qodoka 48-aad ee sharciga lambar 3 ee la dagaallanka musuqmaasuqa iyo dambiyada dhaqaalah, oo la meel mariyay 2003-dii.
5- Ku tacaddiga xafiiska, taasoo ka dhan ah qodobka 46-aad iyo qodobka 48-aad ee sharciga lambar 3 ee la dagaallanka musuqmaasuqa iyo dambiyada dhaqaalah, oo la meel mariyay 2003-dii.
Maxkamadda ayaa Cali Bunow ku sii deysay dammaanad dhan Sh5m, waxaana laga mamnuucay inuu tago xafiiska Ismaamulka Garissa.
Qoraalka sawirka,Maxakamadda ayaa Bunow ku sii deysay damiin lacageed oo dhan 5 milyan oo shilinka Kenya ah
Guddiga Anshaxa iyo La dagaallanka Musuqmaasuqa ee Kenya ayaa Isniintii soo xiray Barasaabka Ismaamulka Garissa Cali Bunow Qorane iyo afarta kale ee xafiiskiisa ka tirsan, waxayna xalay ku baryeen xarunta Integrity Centre ee magaalada Nairobi, kahor intaan saaka maxkamadda la soo taagin.
‘Caddeyn lasoo bandhigay ma jirto’
Dhamaan mas’uuliyiintan ayaa hadda laga mamnuucay in ay tagaan xafiisyada dowladda, balse qareenka u doodaya Cali Qorne ayaa sheegaya in aaney jirin wax caddeyn ah oo ku aadan eedaha loo jeediyay ee la xiriira musuqmaasuqa oo la soo bandhigay.
Cali Bunow Qorane wuxuu guddoomiyaha Garissa yahay tan iyo sanadkii 2017-kii.
Dacwad oogaha guud ee Kenya ayaa horey u amray in la soo xiro mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya oo ay ka mid ahaayen guddoomiyaal gobol, wasiirro iyo dad kale. Dadkaas dhamaantood waxaa loo jeediyay eedo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarin lagu lunsaday dhaqaalaha dowladda.